शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ला त बुधवारको बजेटले ? | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ला त बुधवारको बजेटले ?
on: May 29, 2019 मुख्य खबर, लगानी
जेठ १५, काठमाडौं । सरकाले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अपराह्न ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । यस बजेटले पूँजीबजारलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने विषयमा आम लगानीकर्ताको उत्सुकता र चासो देखिएको छ । पूँजीबजारका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर घटाउनेदेखि शेयर धितोकर्जाको सीमा बढाउने विषयसमेत आगामी बजेटमा समेट्न सुझाएका थिए । साथै पूँजीबजारका सम्बन्धमा सरकारको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझाव यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्न पनि उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयले टुंग्याउन नसकेको पूँजीगत लाभकर गणनाको विषय टुंग्याउन बुधवारको बजेटमा केही व्यवस्था गरिने आशा लगानीकर्ताको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल पूँजीबजारका लागि नफापेको गुनासो गर्दै अर्थमन्त्रीको बर्खास्तीको मागसमेत गर्दै आएका लगानीकर्ताको माग बुधवारको बजेटले कत्तिको सम्बोधन गर्ने हो त्यसका लागि भने ४ बजेसम्म कुर्नुपर्ने छ ।
के चाहन्छन् लगानीकर्ता ?
नयन बास्तोला, महासचिव, शेयर लगानीकर्ता दबाब समूह
यस वर्ष पूँजीबजारको इतिहासमै पहिलोपटक रिलेदेखि आमरण अनसनको कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्ने अवस्था आयो । फलस्वरूप केही सकारात्मक प्रभाव परेको पनि हाम्रो समूहले अनुमान गरेको छ । हामीले यसअघि नै उठाएका ३२ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आए समग्र लगानीकर्ताको हित हुने थियो । हाम्रो ३२ बुँदे मागमा पूँजीबजारलाई सरकारले प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, प्रत्येक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने, प्रत्येक जिल्लामा ब्रोकर सेवा उपलब्ध गराउने लगायत छन् ।
अध्यक्ष, नेपाल पूँजीबजार संघ
आगामी बजेटले महिला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको विषय समेट्न सके राम्रो हुने थियो । पूँजीबजारमा पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यो संख्या अझ बढाई महिलालाई पनि पूँजीबजारबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वातावरण आगामी बजेटले तय गरोस् । यसका लागि महिलाको कारोबारमा कर छुटको व्यवस्था आगामी बजेटले गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो ।
नेपालमा पूँजीबजार यसै वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा अबको बजेटले सबै लगानीकर्ताको हातमा सर्वसुलभ तरिकाले यो सुविधा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजीगत लाभकर घटाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । साथै शेयर धितोकर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि हाम्रो संघको सुझाव छ । गतवर्षको बजेटमै उल्लेख भएको बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयलाई पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आगामी बजेटमार्फत व्यवस्था हुनुपर्छ ।
So am lama
Sathiharule gareko mag puts huncha banne lagxa.